Air tony anaty baoritra AC - China Ningbo Hicon Industry
Marina Air-tony anaty baoritra Air-javatra mampahalefaka Description tony ny rivotra-javatra mampahalefaka rivotra anaty baoritra dia natao manokana ho an'ny fampiharana-dranomasina, ary toeran-kafa toy ny maotera efitrano fanaraha-maso, atrikasa, switchboard efitra, galera sns, izay ahitana an-trano tarika sy ny vondrona ivelan'ny trano. Ny rivotra no tena javatra dia avy amin'ny vondrona fikirakirana, ka mifehy ny tarika anisan'izany ny asa tontonana. compressor, solika Separator, rivotra-tony condenser, condensing tsindry regulator, mpandray, sivana, nahita fitaratra, mihidy-miditra tsimoramora eny, liqui ...
Marina Air-tony anaty baoritra Air-javatra mampahalefaka
Ny rivotra-tony-javatra mampahalefaka rivotra anaty baoritra dia natao manokana ho an'ny fampiharana-dranomasina, ary toeran-kafa
fanaraha-maso toy ny maotera efitra, atrikasa, switchboard efitra, galera sns, izay ahitana an-trano sy ny vondrona
vondrona ivelan'ny trano.
Ny rivotra no tena javatra dia avy amin'ny vondrona fikirakirana, ka mifehy ny tarika anisan'izany ny asa tontonana. compressor, solika Separator, rivotra-tony condenser, condensing tsindry regulator, mpandray, sivana, nahita fitaratra, mihidy-miditra tsimoramora eny, rano Separator etc.
Ny tarika no naka fanahy orinasa (anisan'izany ny tsindry fitsapana, vacuum fitsapana, mandeha fitsapana.), Ary ny mpanjifa dia afaka mampiasa azy io rehefa avy mampifandray refrigeration fitsipika, ary ny hery loharano.
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A, R22 sns
● Compressor: manasa-hermetic piston karazana.
● Condenser: niampita varahina-Fin sy varahina-Tube karazana, avo fahombiazana sy ny tsara harafesiny
● System valves: Danfoss (Danemark), azo ianteherana sy mateza.
● V-fehikibo entin'ny mpankafy-maotera, antoka feo ambany sy ny ambaratonga ambany hovitrovitra.
● Synthetic resin vovoka ho vy casing ho an'ny fampiharana an-dranomasina.
● hihena na fanafanana hafanan'ny dia fametrahana fiara sy ny fanehoana amin'ny tontonana fanaraha-maso, lavitra fanaraha-maso dia
● Control karazana: kilasika fanaraha-maso.
● 50/60 Hz, 3 dingana.
Manaraka: Air tony Self hita AC
Marina Air Conditioning Package Unit
Marina anaty baoritra Air-javatra mampahalefaka
Marina Type anaty baoritra Air-javatra mampahalefaka